» ‘वातावरण राम्रो भए पुरै जिल्लामा साझा बस हाल्छौँ’–भेष खड्गी
‘वातावरण राम्रो भए पुरै जिल्लामा साझा बस हाल्छौँ’–भेष खड्गी
२०७५ असार २६,मंगलवार १३:२४
मकवानपुर, २६ असार । केही समयदेखि हेटौँडा नगरीमा ‘मकवानपुर साझा यातायात नगर बस’ संचालनमा आएको छ । हेटौँडाका केही व्यवसायीहरुले बस संचालनमा ल्याएका हुन् । छोटो समयमा नै हेटौँडावासी मन जित्न सफल साझा यातायातले वातावरण मिलेमा अरु थप नगर बस संचालनमा ल्याउने जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा मकवानपुर साझा यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष भेष खड्गीसँग तु खबरका जी. न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।
साझा यातायातले नगरवासीलाई राम्रै सुविधा दिइरहेको छ नि हैन ?
–हो साझा यातायात(नगर बस) सञ्चालनमा आएकोदेखि नै नगरवासी खुशी छन् । सरल यात्रा, बजारमा किनमेल गर्दा ढिलो भयो गाडी पाईँदैन भन्नु परेन, गाडीभाडा चर्को भयो भन्नुपनि परेन, २६ जनाको सिटको क्षमता भएकोले मान्छे अट्दैन भन्नु परेन अनि मान्छेलाई कसैले हेपचेप गर्छ भनेर सिसि क्यामेरा समेत बस मै जडान गरिएको छ । सहयोगका लागि २ जना कर्मचारी बसमै हुन्छन्, प्रत्येक यात्रुलाई ५ लाखको दुर्घटना बिमा गरिएको छ, अनि के चाहियो त ? यति भएपछि सोचेको भन्दा पनि बढी सुविधा सम्पन्न छ साझा यातायात ।
साझा यातायात हेटौँडामा सञ्चालनमा आएको कहिलेदेखि हो ?
–२०७५ साल असार २ गतेबाट सञ्चालन शुभारम्भ गरिएको हो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको नगरप्रमुख हरिबहादुर बाहुलीबाट उद्घाटन गरी नगर बस संचालनमा ल्याइएको हो ।
अहिले कतिवटा नगर बस संचालनमा छन् ?
–अहिले ११ वटा छन्, ९ वटा फेरी थप्दै छौँ ।
२० वटा नगर बसले पुरै मकवानपुर जिल्लालाई सेवा दिन पुग्छ त ?
–२० वटाले मात्र त पुग्दैन । वातावरण राम्रो भयो भने मकवानपुर जिल्ला भरि नै नगर बस संचालन गर्ने हाम्रो ईच्छा हो ।
साझा यातायात प्रा.लि.को लगानी कति हो र प्रा.लि.मा कति जना पार्टनर हुनुहुन्छ ?
–हामी १२ जना छौँ, मकवानपुर साझा यातायात प्रा.लि.मा हाम्रो अहिलेको कुल लगानी भनेको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ हो ।
अपाङ्गमैत्री छ नगर बस भनिएको छ, अपाङ्गता भएकै व्यक्त बस चढ्न परेमा स्ल्याब छैन,कसरी भयो त ?
–बस अपाङ्गता मैत्री नै छ । उहाँहरुलाई बसमा चढ्न र ओर्लन मदत गर्न २ जना कर्मचारी बसमा नै हुन्छन् । उहाँहरुलाई भाडादरमा पनि ५० प्रतिशत छुट छ । उहाँहरुलाई मात्र होईन, ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि भाडामा ५० प्रतिशत छुट छ । मानवीय सहयोग पनि रहन्छ । विद्यार्थीहरुलाई परिचयपत्र हेरेर ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ, यो सबै सुविधा अरुमा पाईदैन ।
बिहान कति बजेदेखि बेलुकी कति बजेसम्म बजारमा बस पाईन्छ ?
–बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म बजारमा बस चढ्न पाईन्छ ।
साझा यातायातले मान्छे बढी कोच्यो, मयुरी,अटो,म्याजिक, टेम्पोका संचालकहरु मर्कामा परे भन्ने गुनासो छ नि बजारमा ?
–२० वटा साझा बसले साना यातायातलाई मर्का पर्दैन, अटो, टेम्पो, मयुरीजस्ता यातायात जहाँ भन्यो त्यहीँ पुग्ने गर्छ । हाम्रो बस हाई वेमा मात्र चल्ने हो । हो, कोहीलाई समस्या पर्यो होला तर सबैको आ–आफ्नै यात्रुहरु हुन्छन् । त्यसैले, मर्का पर्छ जस्तो मलाई त्यति लाग्दैन ।
बस कहाँ–कहाँसम्म पुग्छन् त ?
–हेटौँडाको बुद्धचोक हुँदै थानाभर्याङ, नवलपुर, लेवट, सान्नान्टार, रजैया हुँदै मनहरी र बुद्धचोकबाट सानोपोखरा, पिप्ले, चौघडा, पुतली बजार, रंगशाला, हात्तिलेट हुँदै सल्लाघारी, कमाने ७ र ८ लगायतका ठाउँ हुँदै बुद्धचोक यसको रुट हो ।
थोरै भाडा लिएर सेवा दिने भनिरहनु भएको छ । कति कर्मचारी छन् नगर बसमा ? तलब व्यवस्था कसरी गर्नुहुन्छ ?
–हो, हाम्रो उदेश्य कमाउने भन्दा पनि यात्रुलाई सेवा दिने हो । हाम्रो कर्मचारी ७५ जना छन् । बस राम्रोसँग चल्न दिए भाडाबाट तलब दिन पुग्छ ।
बस संचालनमा के समस्या छन् त ?
–सडक राम्रो छैनन्, समस्या भनेको नै यी नै हुन् । अरु त ठिकै चलिरहेकै छ । भइपरी आउने समस्याहरुमा आफ्नै लगानी जान्छ । सम्बन्धित निकायले यस्ता कुराहरुमा सोचिदिए साझा बस संचालनमा कुनै समस्या छैन ।
समय दिनुभयो धन्यवाद ।
–तु खबर मार्फत हाम्रो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँ लगायत सम्पूर्ण तु खबर टिमलाई नै धन्यवाद भन्न चाहान्छु ।